विश्वकै धनी जोडी जो भाँडा माझेर जिवन चलाउँछन्, के विश्वास गर्नुहुन्छ ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
विश्वकै धनी जोडी जो भाँडा माझेर जिवन चलाउँछन्, के विश्वास गर्नुहुन्छ ?
मानिस अलिकति सम्पन्न हुनासाथ विलासी बस्तुहरुको चाहना राख्छ । घरमा नोकरचाकर र गाडी घोडा राख्ने इच्छा हुन्छ । तर विश्वकै धनी व्यक्ति जसले उदाहरण पेश गरेका छन् । उनीहरुले साधारण ब्यक्तिले जस्तै आफ्नो जिवन ब्यतित गरेका छन् भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक विल गेट्स र उनकी पत्नीले सामान्य जिवन ब्यतित गरेका छन् ।
उनीहरुका घरमा न काम गर्ने ब्यक्ति छन् नत उनीहरु अरुले पकाएको खाना खान्छन् । पछि एक अध्ययन प्रतिवेदनले बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा गेट्स दुवै विश्वकै सबै भन्दा धनी जोडी बनेको देखाएको थियो । सन् १९७५ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टका सह संस्थापक रहेका बिल गेट्सले सन् १९९४ मा त्यहीँकी एक कर्मचारी मेलिण्डा सँग विवाह गरेका थिए ।
मेलिण्डा गेट्स बिल गेट्स की पत्नी हुन् । उनले विवाह गरेको २५ वर्ष बितिसकेको छ । यि दम्पत्ती विगत २५ वर्षदेखि हरेक राति भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् । आफ्नो खाना आफै पकाउँछन् । दैनिक जिवनमा पर्ने आफ्नो ब्यक्तिगत काम आफै गर्छन ।